कोभिड १ ((कोरोनाभाइरस) लाई हाम्रो प्रतिक्रिया | KarmanHealthcare.com
COVID-19: हाम्रो दृष्टिकोण
जब यो कोभिड -१ to को लागी आउँछ, हामी तपाइँ जान्न चाहन्छौं कि हामी हाम्रा कर्मचारीहरु र समुदाय लाई सुरक्षित राख्न प्रतिबद्ध छौं- र हाम्रा ग्राहकहरुको राम्रो ख्याल राख्दै।
यहाँ के हामी हाम्रा कर्मचारीहरु र ग्राहकहरु को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के गर्दैछौं:
हामी जहाँ बाट सम्भव छ घर बाट काम मा कर्मचारीहरुलाई समर्थन गर्दैछौं। सौभाग्य देखि, हामी केहि समय को लागी एक ठाउँ मा एक व्यापार निरंतरता र घर बाट काम प्रणाली भएको छ-त्यसैले तपाइँको पेशेवर उत्पादन प्रबन्धक तपाइँ संग कुराकानी हुन सक्छ जबकि सुरक्षित संग आफ्नो परिवार संग घर मा।
हामीले हाम्रो लस एन्जलस वितरण केन्द्र मा धेरै पार्टनरहरु बाट टाढा टाढाको कार्यप्रवाह को फोकस रूपान्तरण गरेका छौं, जसमा घटेको घण्टा र वर्कस्टेशन परिवर्तन को एक संयोजन को माध्यम बाट सामाजिक दूरी को अभ्यास सहित।
हामीले सरसफाइ र स्वच्छता प्रोटोकल अझै पनी कर्मचारीहरु जो प्याकि and्ग र तपाइँको खरिद मेलिंग को लागी अझै बढेको छ।
यो मास्क, पन्जा, रक्सी, पोंछे, र धेरै धेरै सरसफाइ उत्पादनहरु सामेल छन्।
हामीले अस्थायी रुपमा बाधाहरु लाई वितरण को लागी हाम्रो परम्परागत नेटवर्कहरु बाट केहि बाँकी रहँदा पुनर्निर्देशित गरेका छौं पहुँचयोग्य हाम्रो स्थानीय ग्राहकहरु लाई फोन र इन्टरनेट द्वारा। साथै, ती ग्राहकहरु लाई अब हामी प्रत्यक्ष लस एन्जलस वितरण केन्द्र मा सामानहरु को लागी "प्रत्यक्ष गोदाम र उही दिन ढुवानी" को विकल्प छ। यदि तपाइँ यसलाई छिटो डीलरहरुको हाम्रो नेटवर्क को माध्यम बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, हामीलाई तुरुन्तै कल गर्नुहोस्! यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागी तपाइँ एक समाधान संग प्रदान गर्न को लागी र तपाइँको चिकित्सा उपकरण एकै दिन बाहिर पठाइयो। हामी यहाँ छौं तपाइँको लागी।
हामीले विशेष गरी प्रमुख शिपिंग नेटवर्कहरु संग काम गरेका छौं फेडेक्स र यूपीएस उस्तै को लागी उठाउन र छिटो डेलिभरी।
बिरामी को कुनै लक्षण संग मानिसहरु हाम्रो सुविधाहरु मा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। हामी पछ्याइरहेका छौं CDC दिशानिर्देशन रोग को कुनै पनि प्रकार पछि काम मा फिर्ता ढिलाइ को लागी।
हाम्रा सहकर्मीहरु को लागी जो आफ्नो सुरक्षा मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी आवश्यक छ - वा उनीहरुका परिवारहरु को सुरक्षा - हामी यो सुनिश्चित गर्न को लागी उनीहरु एक पेचेक नछुटाउन के गर्न को लागी तयार छौं।
हामीले सधैं सोचेका छौं कर्मान एक रमाईलो ठाउँ को रूप मा तपाइँ ह्या hang्ग आउट गर्न को बारे मा जान्न को लागी, र को लागी पसल व्हीलचेयर। तपाईंलाई थाँहा थियो? हामी चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलामा आलोचनात्मक रूपमा आवश्यक भन्दा बढि भाग लिन्छौं गतिशीलता उपकरण हामी वर्ष भर मा परिचित भएको छ? अहिले, हामी सोच्छौं कि हामी अझै पनी तपाइँलाई ती महान अनुभवहरु दिन सक्छौं, जबकि उनीहरु र उनीहरुका परिवारहरु को लागी के गर्न को लागी हाम्रा कर्मचारीहरु लाई समर्थन गर्दै। (यदि कुनै बिन्दुमा कि परिवर्तन हुन्छ, हामी हाम्रो दृष्टिकोण परिमार्जन गर्दछौं र तपाइँ यहाँ यसको बारे मा थाहा छ।)
ओह, र एक थप कुरा: को शक्ति को बारे मा नबिर्सनुहोस् गतिशीलता ती को लागी कि यो देश भर मा चिकित्सा आवश्यकताहरु को यो समय मा सबैभन्दा धेरै आवश्यकता छ। सबै भन्दा राम्रो चिकित्सा अभ्यास को बारे मा जान्नुहोस्। आज तपाइँको चिकित्सा आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो गतिशीलता विकल्प को बारे मा जान्नुहोस्। हामीलाई लाग्छ कि तपाइँ खुशी हुनुहुनेछ कि तपाइँ गर्नुभयो।
राम्रो हेरचाह लिनुहोस्,
यो कर्मान टीम *** २ Custome बर्ष भन्दा बढी को लागी राष्ट्रव्यापी हाम्रो ग्राहकहरु को सेवा ***